अहिले पनि हामीसँग कर्मचारीको अभाव नै छ - Palikanews.com
अहिले पनि हामीसँग कर्मचारीको अभाव नै छ
१५ कार्तिक २०७७, शनिबार १२:०८
स्थानीय तह केन्द्रित विषयमा सटीक प्रश्न सटीक जवाफको श्रीङ्खला प्रमुखसँग ६ प्रश्न ? मा प्रदेश–२ अन्तर्गत पर्सा जल्लाको स्थानीय तह वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय कुमार सरावगीसँग पालिका न्यूजका लागि प्रदेश–२ का संवाददाता नितेश यादवले गरेको संवादको सम्पादित अंश :
अब भन्न चाहिँ ग्रिन जोन मै भनिन्छ पर्सा जिल्लालाई । तैपनि यो लकडाउन, निषेधाज्ञा खुल्ला गरिएको छ । यो अवस्थामा चै रिक्स त्यतीकै छ, तैपनि स्थिति हेर्दा कन्ट्रोल अवस्थामै छौँ । मलाई एकज्याक्ट त थाहा छैन । किनभने म ५÷७ दिनदेखि वीरगञ्ज बाहिर नै छु । तैपनि दिनमा ६÷७ वटा भन्दा बढी केसहरु आइरहेकै छैन ।
विकास निमार्णको काम विगत ६/७ महिनादेखि नै प्रभावित छ । विकास निमार्णका काम २ वटा कारणले प्रभावित भएको हो । एउटा त कोरोना नियन्त्रणमा हाम्रो खर्च बढेको छ, एकातिर कोरोनाको कालमा एकदमै फिक्स टाइम थियो त्यतिबेला चै विकासका कामहरु गर्न/गराउन पनि गाह्रो थियो । त्यसको कारणले धेरै कामहरु प्रभावित भएका छन् । तैपनि हामी प्रयास गर्दै छौँ, थुप्रै योजनाहरुलाई समयमै पुरा गर्नका लागि । जे–जस्तो अवस्था छ, सावधानी अपनाएर काम गर्न लागिपरेका छौँ । तर, अहिले जुन गतिमा हुनुपर्ने हो त्यो स्पिडमा हुनसकेको छैन । गएको वर्ष पनि हामीले लक्ष्यको ६७ प्रतिशत काम पुरा गर्न सक्यौँ । अब यो वर्ष अहिले सम्म गर्नु पर्नेमा कुनै खासै प्रगति हुन सकेको छैना । तर, अब हामीले सबै टेन्डरहरु निकालीसकेका छौं । एक महिनाभित्र सबै कामहरु सुचारु हुन्छ ।
३) तपाइँको पालिकामा यो बर्ष के–कस्ता कार्यक्रमहरु प्रमुख प्राथमिकतामा परेका छन् ?यसपाली हामीले उज्यालो वीरगञ्ज भन्ने एउटा कार्यक्रम ल्याएका छौँ । जसमा १४ करोडको करिब लाइटिङको कामहरु हामी कँहा हुँदै छ । त्यसमा १४ हजार बत्तीहरु लाग्दैछ । हुन त यो कार्यक्रम २४ करोडको हो । तर, यो साल हामीले १४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दैछौँ । दोस्रो चाँही मेडिकल वेस्ट हुन्छ, मेडिकल फोहोर मैलाहरु त्यसलाई डिसइन्फेक्सन गर्ने हामी बनाउन गइरहेका छौँ । त्यसको पनि टेन्डरको कामहरु भएर प्रकृया २/४ दिनमै अगाडि बढ्ने अवस्थामा छ । ग्रेहरुको माथि ढलाई गरेर सानासाना ढुगां राख्दिन्छौं जसले गर्दा फोहोर नहोस् । र वीरगञ्जको मुटु घण्टाघर मै हाम्रो आफ्नो १० विघा जग्गा छ, त्यसमा कम्पाउण्ड बनाएर अगाडिको कामहरु गर्दैछौँ । यस्तै कामहरु कामहरु प्राथमिकताका साथ गर्दैछौँ ।
४) पालिकामा कर्मचारीसँग काम गर्न कतिको सहज छ ?
अब यस्तो छ हेर्नुस्, महानगरपालिका भएको छ तर, महानगरपालिकालाई चाहिने क्षमताको कर्मचारी अहिले पनि हामीसँग छैन । नेपाल सरकारले लोकसेवा लिएर पठाएका छन् । त्यो छौँटो, सातौँ तहको मान्छेहरु छन् । जुन अनएक्सप्रिएन्स नै छ । तर, अब बिस्तारै टेन्ड भइराख्नुभएको छ । तैपनि जुन महानगरपालिकाको हैसियतमा जनु क्यापिसिटीको कर्मचारी चाहिन्छ त्यो छैन । नगरपालिका र उप–महानगरपालिकासम्मको लागि ठिक थियो । महानगरपालिकाको हिसाबमा अहिले पनि हामीसँग कर्मचारीको अभाव नै छ ।
हाम्रो बढी फोकस अहिले चै वेस्ट म्यानेजमेन्टमा थियो । जसमा हामी दैनिक १ करोड लिटर पानीलाई प्रशोधन गर्नको लागि ३ करोड क्षमता लिटरको फोहोर पानी केन्द्रको सुरु गर्यौँ । त्यस्तै अर्को प्रोजेक्ट थियो हाम्रो । स्वालिडिवेस्ट हामीले सुरु गयौँ । विधिवत उद्धघाटन हुन बाँकी छ । जतिपनि वीरगञ्जमा स्वालिडिवेस्टहरु थियो । कुहिने र नकुहिने गरी । कुहिनेबाट मल बनाउने र नकुहिनेलाई जतिसके छापेर बेच्ने बाँकी रहेकालाई डम्पिङ्ग गर्ने । त्यसको हाम्रो एउटा प्रोजेक्ट ६० करोडको लागतमा रेडी भइसकेको छ । अब त्यहीँनेर हामीले मोडिकल वेस्टको पनि प्लान्ट बनाउँदै छौँ र एउटा बायो ग्यास प्लान्ट पनि त्यही निर बनाउन गइरहेका छौँ । त्योसँग–सँगै हाम्रो नँया रोडको निर्माण कार्य सम्पन्न हुँदैछ ।
अब यस्तो छ हेर्नुस्, हामी जे बोलेर आउँछौ, त्यो हामी घोषणा पत्रमा ल्याउछौँ, जो सोच बनाउँछौ, हाम्रा विपक्षी साथीहरुले सोच बनाएर आउनुहुन्छ नि सबै चिजको एउटा गिभेन कन्डिसन भन्छौँ के । अवस्थामा मात्र पुरा गर्नसकिन्छ । त्यो अवस्था पुरा हुन सकेन भने गाह्रो हुन्छ । किनकी राजश्व उठ्ने कुरादेखि लिएर धेरै कुराहरु जाचेका हुन्छन् । तर, नँया–नँया कानूनहरु ल्याएर बनाउनुमै टाइमहरु बित्यो । सिस्टमलाई नै सेट गर्नमा टाइमहरु बित्यो । त्यैपनि बोलेका कुराहरु भन्दा बढी गर्ने प्रयासहरु गर्दैछौँ । हामीलाई लाग्दैन कि त्यसो गर्न सक्दैनौँ । यो हाम्रो पाँच वर्षको कार्यकालमा हामीले जति सोचेको कुराहरु सबै पूर्ण हुँदैन । मलाई थाहा छ, यो कुराहरु । किनभने अहिले पनि डिमार्केशन समाप्त भएको छैन । त्यैपनि हामी सन्तुष्ट छौँ । हामी जति गरिरहेका छौँ, आफ्नो क्षमताभन्दा बढी हामी काम गर्न सकिरहेका छौँ ।
लोभ लाग्ने गरी पाक्नै लाग्यो स्याउ
गाउँपालिका52 years ago
आजबाट रोकियो सङ्घीय सरकारी खर्च
व्यवसायीका समस्या हल गर्दै वाणिज्य महासङ्घ
पुल निर्माणकाे काम चार वर्षदेखि अलपत्र
शिक्षा / स्वास्थ्य52 years ago
सेयर बजारमा ४० अंकको पहिरो
मेगा बैकलेस्थानीय तहलाई सहुलियत कर्जा